ဂျပန်လူမျိုးအသက် ၃၀ မှ ၃၄ နှစ်အတွင်းရှိလေးပုံတပုံသည်အပျိုစင်များဖြစ်နေဆဲ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ဂျပန်အမျိုးသားများခေတ် 1 ၏4/ 30 34 မှဆဲ (2012) Virgins Are
ဂျပန်အမျိုးသားများခေတ် 1 ၏4/ 30 34 မှတိုင် Virgins Are
အဆိုပါဂျပန်အပတ်စဉ် Playboy မဂ္ဂဇင်းပြည်သူ့အင်အားဂျပန်အင်စတီကျုနှင့်လူမှုဖူလုံရေးသုတေသနပြုလေ့လာမှုတစ်ခုအရသိရသည်နီးပါးတဦးတည်းလေးအတွက်ဂျပန်ယောက်ျား 30 မှ 34 အသက်ကြောင်း၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် edition အတွက်အစီရင်ခံတင်ပြနေတုန်းပဲတဲ့ကညာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျပန်ချယ်ရီ Boy အသင်း (အပျိုကညာနေသောလူ ... အဟမ်း, ဂျပန်ကလပ် ... ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူအိပ်မည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုရှာဖွေရှာကြသည်) ကိုအပတ်စဉ်နှင့်အညီ, တစ်ဦးအကျပ်အတည်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည် ဂျပန် Playboy မဂ္ဂဇင်း။ "ဤရေခဲတောင်သာအစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျပန်ချယ်ရီ Boy အစည်းအရုံးတည်ထောင်သူရှင်က Watanabe ဂျပန် Playboy မဂ္ဂဇင်းကိုပြောပြတယ်။ "ဒီအစစ်အမှန်ဒီအခြေအနေထက်အများကြီးပိုဆိုးသည်။ "
Watanabe ကစာရေးသူတို့၏အပျိုစင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူလူအနည်းငယ်ကသာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသူတို့ရဲ့မိုးခေါင်ကျိုးပဲ့ဘဲရန်ဝန်ခံရန်ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဟူမူကား, သူတို့ဝန်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသည်ထက်အပျိုကညာနေသောပိုပြီးဂျပန်ယောက်ျားရှိပါတယ်စောဒကတက်သည်။
"ဟုအဆိုပါစစ်တမ်းတစ်ခုမမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုပေး၏နဲ့ကျွန်မသူတို့ကိုသင်၏ကျယ်ပြန့်အများစုအပျိုကညာဖြစ်လိမ့်မယ်အလောင်းအစားသူတွေကို၏ 11 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါတယ်။ ထိုသူတို့က Watanabe ကပြောပါတယ် "ဒါ့အပြင်လည်းအဘယ်သူ၏သာအတွေ့အကြုံကိုကတည်းကတန်ဆာများနှင့်ဘာမျှမမှာတစ်ခုတည်း session တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါကို virtual အပျိုကညာတွေအများကြီးသူတို့ကိုအကြားရှိသည့်ယောက်ျားတွေပါဝင်သောလိင်, ဖူးဟု 65 ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းရှိပါတယ်သော်လည်း ။
အဆိုပါဂျပန်ချယ်ရီ Boy အသင်းမှလက်ရှိအချိန်တွင်အဘယ်သူ၏အသက်အရွယ်ဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကနေသူတို့ရဲ့ 517s အထိ 40 အဖွဲ့ဝင်ပါတယ်။ များစွာသောမိန်းမက၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုကောက်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အတွက်အသင်းအဖွဲ့ join ။ အဖွဲ့ဝင်အချို့သာအနည်းငယ်ဆိုသော်ငြားတကယ်အောင်မြင်စွာလိင်ကြုံနေရအားဖြင့်ကလပ်ကနေ "ဘွဲ့ရ" တွင်အောင်မြင်။
"ငါသည်အသင်းဥက္ကဋ္ဌရယ်နဲ့ကျွန်မနေဆဲမဆိုလိင်မရနိုငျသညျ, ဒါကြောင့်ငါတစ်စုံတစ်ဦးကဘွဲ့ရသောအခါငါခံစားချက်တွေကိုရောရှိသည်ဟုဝန်ခံရပါမယ်" ဟုက Watanabe ကပြောပါတယ်။ "ယောက်ျားများသူတို့လိုမက်ဆေ့ခ်ျချန်ထားသဖြင့်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ patronizing-မှတ်ပုံတင်ရန်ဖယ်ရှားလိုသော, ချက်ချင်းပြောင်းလဲမှုအောင်မြင်သူကို '' သင်ကယောက်ျားတွေလည်းထမြန်မြန်နှင့်ကျော်ရပြု။ ' ငါတကယ်ကမုန်း။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်နေဖို့နှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များမှအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြရန်အောင်မြင်သူယောက်ျားတွေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကသူတို့ရဲ့အပျိုစင်ဆုံးရှုံးတခါ, သူတို့ကအစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ကညာခဲ့ပွီးလြှငျအကြောင်းကိုမေ့လျော့ချင်ပုံရသည်။ "
ဂျပန်ချယ်ရီ Boy အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များကသူတို့မကြာခဏသူတို့တစ်တွေ 32 နှစ်အရွယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှဤပုံပြင်အပါအဝင်လိင်ခဲ့ဘဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဘယ်လိုပုံပြင်တွေပြောပြဘယ်မှာပါတီများ, အဘို့မှန်မှန်ဖြည့်ဆည်း။
"ငါသည်အသက်အရွယ်အဘို့အယောဂသင်တန်းတွေသွားခဲ့တာနဲ့နောက်ဆုံးတော့သို့သော်ကိုယ်ကချင်ရွှေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရနိုင်" ဟုသူကအပတ်စဉ် Playboy ပြောပြသည်။ "ရုံကအခြားနေ့ကငါနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ် fellatio ပေးခြင်းငါ့အိပ်မက်အောင်မြင်။ "
ချယ်ရီ Boys အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များကပဲဖြစ်စေ, အပျိုကညာ၏တစ်ခုတည်းသောစိမ်းသို့ lumbered မရနိုင်ပါ။ "အခုကကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့လုပ်နိုင်သမျှကိုလုပ်ပေးသူတို့၏အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးပမ်းကြသူတိုးတက်သောကညာများနှင့်ရှေးရိုးစွဲကညာလည်းရှိနေပါတယ်" ဟုက Watanabe ကပြောပါတယ်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်အပျိုကညာသူတို့အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများ၏အလုံအလောက်ဖူးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလည်းငြင်းပယ်ခံရ၏နာကျင်မှုမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမယ့်သူ manga ကိုနှင့် anime မှာတွေ့ရှိသူများအဖြစ် Two-ရှုထောင်အမျိုးအစားများကိုပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကြတယ်။
"အများစုကလူ့စိုးရိမ်ညာဘက်, လိင်ကနေရပ်တ? သူတို့သည်လည်းကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရရန်သူတို့ကိုလှုံ့ဆျောပေးသောမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ကျေနပ်ချင်သောကွောငျ့ယောက်ျားတွေအမျိုးသမီးတွေတက် chat ။ သငျသညျမိနျးမနှငျ့ကောင်းစွာလျှောက်ရှိရချင်ပေမယ့်သင်တို့ကိုတပ်မက်သောစိတ်နှင့်ကမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုထိုမိန်းမနှင့်ကောင်းစွာလျှောက်တွင်ရဖို့ကခက်ခဲစေသည်လိင်အကြောင်းကိုဤမျှလောက်စဉ်းစားနှငျ့ပွညျ့စုံပါတယ်, "အွန်လိုင်းအမျိုးသမီးဟော်မုန်းဝယ်သူတစ်ဦး 30 နှစ်အရွယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောပါတယ် မိမိအသွေးသားဆန္ဒရမ္မက် stifle ရန်။ "တပ်မက်သောစိတ်မရှိရင်ငါအစဉ်အဆက်ရှိတယ်ထက်အလုပ်နှင့်အတူနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအများကြီးပိုကောင်းလုပ်နေတာပေါ့။ "
"ကျနော်တို့ကအငယ်သားစဉ်မြေးဆက်သက်ကြီးရွယ်အိုများပြီးနောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ်ကျဆင်းနေမွေးဖွားနှုန်းရရှိပါသည်။ ငါအပေါ်လာမယ့်မျိုးဆက်တစ်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်လိင်၏ဘာမျှမသိသောလူငယ်များမဆိုပိုပြီးလိင်အဘို့အ up ပြုလုပ်မရနိုငျသောအဟောင်းများကို fogeys ပြီးနောက်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်သင့်? "သူကအပြောအဆိုအပတ်စဉ် Playboy ကမေးတယ်။ "အဲဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ရှောင်ရှားရန်, မေတ္တာမှာအားနည်းသောသူတို့ကိုသူတို့ကြောင့်ပျော်မွေ့လက်ထပ်ရန်နှင့်ကလေးများရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုသူတို့အဘို့ချောမွေ့စေပြီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မီဒီယာကအပျိုကညာနှိပ်စက်တာနဲ့ကအားလုံးကိုမှာဘယ်သူ့ကိုမှချစ်ခြင်းမေတ္တာနိုင်စွမ်းကြောင်းပြောပါတယ်လာသောအခါသူတို့ကိုအထီးကျန်ခံစားရစေသည်ဘယ်လောက်သိတယ်လျှင်ငါတွေးမိ။ ကျနော်တို့အပျိုကညာအပေါ်တစ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြင်နာတက်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကညာမှာပိုပြီးပြုံးဖို့လိုအပ်